Unyulo lwe-UNWTO lwenziwe nje ngu-Alain St. Ange Millionaire
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Unyulo lwe-UNWTO lwenziwe nje ngu-Alain St. Ange Millionaire
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Yonke le nto yaqala ngenqaku elonwabisayo nge-23 kaMatshi ngo-2017 eBerlin kwi-ITB Function, xa uMphathiswa wezoKhenketho wase-Seychelles uLoustau-Lalanne evuma owayesakuba ngu-Mphathiswa u-St Ange njengoMgqatswa weSiqithi kuNobhala Jikelele we-UNWTO phambi kuka Taleb Rifai ophumayo I-UNWTO SG.
Inxalenye enkulu yehlabathi ibumbene ekuqondeni i-UNWTO Election ye-Seretary kwi-2017 ayigqibanga ngendlela ebekufanele ukuba nayo. Urhwaphilizo, urhwaphilizo, ukungahambi kakuhle kunye nokunye okuninzi kwaxelwa ngexesha lenkqubo yokufumana isikhundla esikhoyo kuNobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili
Omnye wabagqatswa ababekhuphisana ngesikhundla ngelo xesha yayingu Mnu Alain St. Ange. Khange ayithathe into eyenzeke kuye njengonikiweyo. Iminyaka emi-4 kamva inkundla yesibheno ephezulu eSychelles yemveli yamwonga izigidi ezisixhenxe zeSeychelles Rupies okanye malunga nama-7 eedola kumonakalo ngoLwesine.
Uninzi kwihlabathi ngoku libuza ukuba i-UNWTO yayiya kuqhubeka njani kule ngxaki ye-COVID kunye nenkokeli eyahlukileyo ephetheyo?
The I-UNWTO Ngokuqinisekileyo iyakucaca ngakumbi, isasazeke kwimithombo yeendaba, kwaye ivulekele icandelo labucala kunye nabo bonke oorhulumente abangamalungu earhente emanyeneyo ye-UN.
USt Ange wafaka isimangalo eSeychelles ngo-Okthobha u-2017 emva kokuba engavunyelwanga ngurhulumente wakhe ukuma kunyulo lwe-UNWTO. Yonwabile iintsuku ezi-2 ngaphambi konyulo ngexesha lentlanganiso ye-UNWTO yeBhunga eliLawulayo eMadrid. Kwakungalindelekanga kwaye yayiyinto yeentloni ezinkulu kuMgqatswa uSt Ange, abaxhasi bakhe, kunye nalowo wayesakuba nguNobhala-Jikelele uRifai nabanye abaninzi.
Uhambise intetho yeemvakalelo phambi konyulo ebengavumelekanga ukuba akhuphisane kwakhona.
Intetho yeemvakalelo ngu-Alain St Ange kwi-UNWTO Council kwi-2017 emva kokungafaneleki njengoMgqatswa we-UNWTO
UAlain uyayithanda imithombo yeendaba, uyabathanda abantu kwaye ungumxhasi omkhulu wecandelo labucala lokhenketho kunye nezokhenketho. Xa wayengumphathiswa wezokhenketho eSeychelles waqala UVictoria Carnival, umsitho ozise imisitho kunye neendwendwe ezivela kuzo zonke iindawo zehlabathi kwesi siqithi sincinci. Imibhiyozo, evela eTrinidad, Nottingham, Cologne ukuya eRio de Janeiro eSeychelles basathetha ngayo.
Ngelishwa, iSt Ange zange ibenalo ithuba lokuvotelwa ngamazwe angamalungu e-UNWTO.
I-Afrika yayifumana ukuphela okufutshane kwentonga yayiyeyona nto yayixhalabisayo ngexesha lonyulo, kwaye yajika yayinto ebuhlungu ngokutsho kwabaninzi.
Emuva ngo-2017, iinkokheli ezimbini zase-Afrika zazizama ukuzisa i-Afrika kwinqanaba lokhenketho lwehlabathi: UGqr.
Umbutho we-Afrika wamisela uGqirha Mzembi njengomgqatswa we-Afrika, owaqinisekiswa yiSeychelles ngelo xesha. Ngabagqatswa ababini abavela e-Afrika, amathuba e-Afrika ukuba abele owabo njengo-Nobhala-Jikelele waba ngumceli mngeni wokwenene.
I-Zimbabwe phantsi kuka-Mongameli uMugabe inyanzelise i-African Union ukuba inyanzelise i-Seychelles ukuba ingamvumeli u-Alain St. Ange. Uxinzelelo eSeychelles lwalulukhulu kwaye lwalusongela isohlwayo saseAfrika.
URhulumente waseSeychelles unikele kwimizuzu nje engephi ngaphambi konyulo kwaye wanyanzela iSt Ange kunyulo.
Oku yayilihlazo elikhulu kuMgqatswa uSt Ange, kodwa nakwi-UNWTO, kunye nokuthembeka kwenkqubo yonyulo. Ngelishwa, le yayiyenye yeengxaki ezininzi ezothusayo eziqinisekisileyo ukuba umgqatswa wase-Georgia njengo-Nobhala Jikelele kwi-UNWTO General Assembly e-Chengdu, China.
I-Afrika yayinentonga emfutshane kwasekuqaleni, iqala ngo-2017 xa eTurboNews wabhala wathi: Into iyanuka eMadrid.
Ekugqibeleni, uMzembi wayibeka kwindawo yesibini kwaye woyiswa nguZurab Pololikashvili. Olu papasho belunike ingxelo malunga noZurab odlala umdlalo ombi kunye nezinto ezintle kunye nezithembiso ezithandabuzekayo zokufumana iivoti zakhe.
U-Alain St. Angel uvutha umkhondo wakhe kwisikhundla sika-Nobhala Jikelele we-UNWTO
U-Alain St. Ange uziva ukuba waphathwa kakubi ngurhulumente wakhe kwaye akazange ayeke ukwenza intetho yakhe. Wamangalela urhulumente wakhe waphumelela. Emva kokuba ephumelele ityala lakhe, kwafakwa isibheno kwaye ngoku uphumelele kakhulu. Konke oku kwenzeke ngoLwesine, izolo.
INkundla ePhakamileyo yaseSeychelles namhlanje (nge-12 ka-Agasti 2021) ikhuphe isigwebo esixhasa ityala lowayesakuba ngumphathiswa wezokhenketho, u-Alain St. Ange.
Kutheni le nto u-Alain St. Ange eza kufumana i-7 yezigidi zeerandi kukhetho olulahlekileyo lwe-UNWTO?
USngenge, owakhankasela ngokungakhathali esi sikhundla esenza ilahleko enkulu yemali kwinkqubo yokuzama ukuba nguNobhala-Jikelele we-UNWTO wokuqala wase-Afrika.
Isigqibo sokurhoxisa ukugqatswa kwakhe sathathwa ngurhulumente waseSeychelles emva koxinzelelo olunzima olwaziswa yi-African Union eyayisongela ukohlwaywa kwezoqoqosho.
Umongameli wase-Seychelles, ke, wakurhoxisa ukutyunjwa kuka-St Ange xa ​​wayesele ekwiintlanganiso ze-UNWTO Council Council eMadrid, kwiintsuku ezi-2 phambi konyulo.
Emva kokuba uSt Angel ebuyele ekhaya waya enkundleni kwaye wangqinelwa yiNkundla ePhakamileyo, eyonganyelwe yiJaji uMelchior Vidot, xa wawongwa ngomonakalo kwi-Rs164,396.14 iisenti (malunga ne-US $ 12,366)
Le mali ayikhange ihlawule nakude iindleko ze-St. Uyalele amagqwetha akhe ukuba abhenele kwinani lomonakalo kuphela. Uye wongeza neentlungu, ukuthotywa kunye nomonakalo wengqondo obangelwe sesi sehlo.
Emva kweminyaka eliqela, lo mbandela ugqityiwe ekugqibeleni kwiNkundla yeziBheno, eyona Nkundla iphakamileyo yaseSeychelles. Ngelixa igqwetha-Jikelele lalifuna, kwisibheno, ukuba ityala lichithwe ngokupheleleyo, iSt Ange ibhenele ngokuchasene ne-quantum.
Uye waphawula ngokungagungqiyo ukuba isixa esikhutshwe kwinqanaba leNkundla ePhakamileyo sasingenakwanela ukuhlawula iifizi zokufaka iifayili, kodwa akenzanga nto ukubuyisa iindleko ezinkulu awayezenzile ngexesha lephulo lakhe.
Igqwetha Jikelele kwisibheno lazama, aliphumelelanga, ukubongoza ukuba uRhulumente abanjwe kumgangatho owahlukileyo kwezomthetho kunommi kwizenzo zenkohliso.
Ekugqibeleni, ukuba impikiswano yabo yayiza kuphumelela, yayiya kuba nefuthe lokwenza kube nzima ukuba ummi azise isenzo esidlangalaleni nxamnye noRhulumente. Ukuba yenye yezokuqala zohlobo lwayo kulawulo lwethu, ityala lika-Angels namhlanje libe neziphumo ezichaseneyo emva koMgwebo: ukwandisa ubungakanani babemi ukuba bacele umngeni kwizigqibo ezithathwe lisebe elilawulayo likaRhulumente.
Inkundla izolo ilonyusile ibhaso lika-St Ange ukuya kufikelela kwizigidi ezisixhenxe zeerandi, ehlawula ngokufanelekileyo uninzi lweendleko zakhe zokuphuma epokothweni ngexesha lakhe lephulo.
Esi sixa sibandakanya i-1 yezigidi zeerandi kumonakalo wokuziphatha, enye yezona mali ziphezulu ekufuneka zinikezelwe kulawulo lwethu lomonakalo ongeyomali ukuza kuthi ga ngoku.
Oku ngokungathandabuzekiyo kuya kuba ngumgangatho wokuthembisa wabenzi-zicelo ukuqhubela phambili kwizizathu ezifanayo zentshukumo.
Umnumzana St. Angesi ubonwe, iyaqondakala into, eshiya inkundla izolo kamnandi emva kweminyaka emine elwa lo mbandela kwimeko yokuchasana, ecaleni kweqela lakhe elichwayitileyo lamaSeychellois Attorneys, aquka uMnu Kieran Shah, UNkosazana Michelle St. Ange-Ebrahim, noMnu Frank Elizabeth.
URhulumente wayemelwe nguMnu. Stephan Knights. Ngelixa uMnu.